Mmanụ dị mkpa - Njirimara Dị Oké Ọnụ Ahịa | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mmanụ ndị dị Mkpa: Onyinye Dị Oké Ọnụ Ahịa Nature you nwetụla mgbe ị na-eche ihe kpatara isi ísì ụtọ na okooko osisi na akụkụ osisi ndị ọzọ? Ha bụ mmanụ dị mkpa. Ma na mgbakwunye na akụkụ aromatic, mmanụ ndị dị mkpa na-enwekwa homonụ nke ahịhịa na ụfọdụ ogige ndị ọzọ. Mmanụ ndị dị mkpa na-arụ ọrụ nke ọma na oke mkpụkọ dị ala. Ha nwere oke mmetụta na osisi, anụmanụ yana ụmụ ahụhụ. Isi ihe kpatara nke a bụ na mmanụ ndị dị mkpa bụ ihe ochie nke osisi ndị dị n'oge ochie mepụtara ma mepụta ya kemgbe. Anụmanụ ahụ biri na osisi site na mbụ. Ogologo oge nke imekorita ihe a emeela ka ha meghachi omume n ’mmanu ndi a di nkpa n’ uzo ozo ma obu ozo.
A na-ewepụta mmanụ dị mkpa taa site na ngosipụta, uzuoku ikuku ma ọ bụ mmịpụta mmịpụta. Usoro ikpeazụ nke iwepụta mmanụ dị mkpa na-egbu ụfọdụ ọgwụgwọ ha na ụkpụrụ ndị ọzọ. Nke a na-eme ka ha ghara ịdị ụkọ. Mmanụ ndị a amịpụtara dị oke mkpa dị n’ahịa n’ahịa dị ọnụ ala. Agbanyeghị, ha adịkarịghị arụ ọrụ ma ya mere na-enyeghị ndụmọdụ. N'ime usoro mmịpụta ahụ, a na-eji mmiri na uzuoku wepu mmanụ ndị dị na ahịhịa ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị. Ntinye mmanụ na-eji ihe mgbaze dịka mmanya na-ewepụ mmanụ ndị dị mkpa.
A kpọwo mmanụ mmanụ dị mkpa akwụkwọ ochie. A na-eji mmanụ ndị a eme ihe ogologo oge gara aga na mmepeanya ndị Egypt. A na-ejikwa ha eme ihe na India oge ochie, Rome, wdg. Mmanụ ndị dị mkpa ka a na-ejikarị dị ka isi iyi nke isi iyi n'oge ochie. Ndi Egypt nwere igwe buru ibu maka iweputa mmanu di nkpa. Dika esi eji ha na ebumnuche ndi ozo di iche ma nwekwaa oke nma, a na-akpo mmanu di nkpa dika ‘mmanu mmanu’ n’oge ochie. Ojiji ha ji eme ememe okpukpe ahakwara ha aha ‘mmanụ dị nsọ’. Agbanyeghị, aha mmanụ dị mkpa dị ugbu a.
Ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke mmanụ dị mkpa bụ ihe na-adọrọ adọrọ. N'oge a, onye French Chemist ji ha mee ihe na mbụ. E gosipụtara ụdị ọgwụgwọ a 'ọgwụ aromatherapy'. A na-eji ọgwụ aromatherapy eme ihe ọbụna taa, ebe ọ bụ na ọtụtụ mmanụ dị mkpa na-eweta n'ụzọ dị oke mma na ahụike mmadụ. N'ịbụ ndị sitere n'okike, ha anaghị ebutekarị nsonaazụ. Ka osi di, ufodu nwere ike ime ndu ha.
Mmanụ ndị dị mkpa nwere ike inye aka na ọgwụgwọ nke nchekasị, nkụda mmụọ, ike ọgwụgwụ, nsogbu ebe nchekwa, isi ọwụwa, nsogbu ehighị ụra, wdg Ha na-egosi oge ngwa ngwa nke enweghị ike. Nke a bụ n'ihi na ha nwere ike ịbanye na akpụkpọ ahụ ngwa ngwa site na akpụkpọ ahụ n'ime sel. Otu ihe di nkpa eji mmanu mmanu di nma bu ka ha meziwanye ihe eji aru aru. Knowmatakwu banyere mmanụ dị mkpa, biko gaa na anyị ozugbo.